सकारात्मक सोचको शक्तिले तपाईलाई सफल हुन मद्दत गर्दछ - व्यक्तिगत विकास क्याफे
सकारात्मक सोचको शक्तिले तपाईंलाई सफल हुन मद्दत गर्दछ
पोस्ट व्यवस्थापक | 26 सक्छ, 2018 | सकारात्मक सोच, आत्म सुधार लेख, आत्म-सुधार |0|
1 सकारात्मक सोचाइको शक्ति
1.1 सकारात्मक सोच
केही अध्ययनहरूले देखाए कि सकारात्मक सोचको शक्ति - एक अप्टिमिष्टिक मनोवृत्तिले तपाईंको स्वास्थ्य र कल्याणलाई असर गर्न सक्छ।
सकारात्मक सोचको शक्तिबाट हामी के भन्न खोज्छौं? नर्मन भिन्सेन्ट पिल, नेपोलियन हिल, जिग जिगलर, डेल कार्नेगी जस्ता व्यक्तिहरू कसरी उनीहरूको शिक्षाको लागि प्रसिद्ध छन् कसरी सकारात्मक मनोवृत्ति अपनाउँदा तपाईलाई सफल बनाउन सक्छ।
सकारात्मक सोच को शक्ति आकर्षण को व्यवस्था को एक महत्वपूर्ण पक्ष हो।
जब तपाईं सकारात्मक सोच्नुहुन्छ, सकरात्मक कुरा तपाईलाई हुन्छ। जब तपाईं नकरात्मक सोच्नुहुन्छ, नकारात्मक चीजहरू तपाईलाई हुन्छन्। यो सन्देश गुप्तमा प्रचलित छ। नर्मन भिन्सेन्ट पिलले बेचेको 'पावर अफ पोजिटिभ थिंकि' 'को लेखकलाई लेखकले धेरैलाई सेक्रेटको अग्रदूत मान्दछ।
"यो पुस्तक पाठकलाई सुखमय, सन्तोषजनक र सार्थक जीवन प्राप्त गर्न सहयोग पुर्‍याउने एकमात्र उद्देश्यको साथ लेखिएको हो।"
तपाईं आफ्नो गिलास को लागी आधा पूर्ण वा आधा खाली छ कि सोच्नुहुन्छ भन्ने पुरानो प्रश्नको जवाफ धेरै द्वारा उद्धृत छ सकारात्मक सोच को शक्ति मा विश्वास गर्नेहरु को लागी कति महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण छ।
सकारात्मक सोचाइको शक्ति
रेमेज स्यासन द्वारा
सकारात्मक सोच एक मानसिक दृष्टिकोण हो कि दिमागका विचारहरू, शब्दहरू र छविहरू जुन विकास, विस्तार र सफलताको लागि अनुकूल छ भनि स्वीकार गर्दछ। यो एक मानसिक दृष्टिकोण हो कि राम्रो र अनुकूल परिणामको आशा गर्दछ।
एक सकारात्मक दिमागले खुशी, आनन्द, स्वास्थ्य र प्रत्येक अवस्था र कार्यको सफल परिणामको आशा गर्दछ। दिमागले जे आशा गर्दछ, त्यसले फेला पार्दछ।
सबैले सकारात्मक सोचलाई स्वीकार गर्दैनन् वा विश्वास गर्दैनन्। केहीले यस विषयलाई केवल बकवास ठान्छन, र अरूले विश्वास गर्छन् र स्वीकार्ने मानिसहरूलाई खिसी गर्छन्। व्यक्तिहरूमा यसलाई स्वीकार्नेलाई, धेरैलाई यो परिणामको प्रभावकारी रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने भनेर थाहा छैन।
यद्यपि, यस्तो देखिन्छ कि धेरै मानिसहरू यस विषयप्रति आकर्षित भइरहेका छन्, यसको बारेमा धेरै पुस्तकहरू, व्याख्यानहरू र पाठ्यक्रमहरूले प्रमाणित गर्छन्। यो लोकप्रिय विषयवस्तु हो भन्ने विषय हो।
मानिसहरूले यस्तो कुरा सुन्नु सामान्य छ: "सकारात्मक सोच्नुहोस्!", जसले निराश र चिन्तित महसुस गर्दछ। धेरै व्यक्तिले यी शब्दहरूलाई गम्भीरताका साथ लिदैनन्, किनकि उनीहरूलाई उनीहरूको वास्तविक अर्थ के हो भनेर थाहा छैन, वा तिनीहरूलाई उपयोगी र प्रभावकारी रूपमा लिदैन।
कति जना मानिसहरूलाई तपाईले चिन्नुहुन्छ, जसले सोच्न को लागी सकारात्मक सोचको शक्तिको अर्थ हुन्छ?
तलको कथाले यो शक्तिले कसरी काम गर्दछ भनेर वर्णन गर्दछ।
एलनले नयाँ जागिरको लागी आवेदन लिएका थिए, तर उनीहरुको आत्मसम्मान कम थियो, र उनी आफैंलाई असफल र सफलताको अयोग्य ठान्थे, तर उनी पक्का थिए कि त्यो जागिर पाउने छैन।
ऊ आफैंप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण राख्थ्यो, र विश्वास गर्दछ कि अरु आवेदकहरु उनीहरु भन्दा राम्रा र बढी योग्य थिए। एलनले आफ्नो मनोवृत्तिको साथ नकारात्मक विगतका अनुभवहरूको कारण यो मनोवृत्ति प्रकट गर्‍यो।
उनको मन नकारात्मक बिचार र डर संग भरिएको थियो नौकरी को लागी पूरा हप्ता को लागी रोजगार साक्षात्कार अघि। उनी पक्का थिए कि उनी अस्वीकृत हुनेछन्।
अन्तर्वार्ताको दिनमा उनी ढिलो उठे, र उनको त्रासले उनले थाहा लगाए कि उनले लगाउने योजनाको शर्ट फोहोर थियो, र अर्कोलाई इस्त्री चाहिएको थियो। धेरै ढिलो भइसकेको हुनाले उनी झिम्का भरिएको शर्ट लगाएर बाहिर निस्के।
अन्तर्वार्ताको समयमा उनी तनावग्रस्त थिए, नकारात्मक मनोवृत्ति देखाए, आफ्नो शर्टको बारेमा चिन्तित थिए, र भोकाए किनभने उनीसँग खाजामा प्रशस्त समय थिएन।
यो सबै उसको दिमाग विचलित भयो र साक्षात्कारमा ध्यान केन्द्रित गर्न उसलाई गाह्रो बनायो। उसको समग्र व्यवहारले नराम्ररी प्रभाव पार्‍यो, र फलस्वरूप उसले आफ्नो डरलाई पूर्ण गर्‍यो र काम पाएन।
जिमले पनि समान कामका लागि आवेदन दिएका थिए, तर यस कुरामा भिन्न तरिकाले सम्पर्क गरे। ऊ पक्का थियो कि उसले नोकरी पाउने छ। अन्तर्वार्ताको अघिल्लो हप्तामा उनले आफूलाई राम्रो प्रभाव पार्ने र जागिर पाउने कल्पना गर्थे।
अन्तर्वार्ता अघि साँझ उनले आफूले लगाउने लुगा तयार गरे, र केही बेर सुत्न गए। अन्तर्वार्ताको दिन उनी सामान्य भन्दा पहिले नै उठे, र बिहानको खाजा खानको लागि पर्याप्त समय थियो, र त्यसपछि निर्धारित समय अघि अन्तर्वार्ताको लागि पुग्न।
उसले जागिर पायो किनकि उसले राम्रो प्रभाव पा .्यो। अवश्य पनि उनीसँग कामका लागि उचित योग्यताहरू थिए, तर त्यस्तै एलन पनि थियो।
यी दुई कथाहरूबाट हामी के सिक्छौं? के यहाँ कुनै जादू प्रयोग गरिएको छ? होइन, यो सबै प्राकृतिक छ। जब मनोवृत्ति सकारात्मक हुन्छ हामी रमाईलो भावना र रचनात्मक छविहरूको आनन्द लिन्छौं, र हाम्रो दिमागमा यो देख्छौं कि हामी वास्तवमै के हुन चाहन्छौं।
यसले आँखामा चमक, अधिक ऊर्जा र खुशी ल्याउँछ। समग्रले राम्रो इच्छा, खुशी र सफलताको प्रसारण गर्दछ। स्वास्थ्य पनि एक लाभदायक तरीका मा प्रभावित छ।
हामी अग्लो हिंड्छौं र आवाज अझ शक्तिशाली छ। हाम्रो शरीर भाषा तपाइँ भित्र महसुस महसुस गर्दछ।
सकारात्मक र नकारात्मक सोच दुबै संक्रामक हो। हामी सबैले एक न कुनै तरिकाले असर गर्छौं, हामी मानिसहरुलाई भेट गर्छौं। यो सहज र अवचेतन स्तरमा, विचारहरू र भावनाहरू स्थानान्तरण मार्फत र शरीरको भाषा मार्फत हुन्छ।
व्यक्तिले हाम्रो आभा महसुस गर्छन् र हाम्रो विचारहरूद्वारा प्रभावित छन्। के यो कुनै आश्चर्यको कुरा हो कि हामी सकारात्मक व्यक्तिहरू वरपर रहन र नकारात्मक व्यक्तिहरूलाई टाढा राख्न चाहन्छौं? यदि हामी सकारात्मक छौं भने मानिसहरूले हामीलाई बढी सहयोग गर्ने छन्। तिनीहरू मन नपराउने र नकारात्मक प्रसारण गर्ने कसैलाई पनि वेवास्ता गर्छन्।
नकारात्मक विचार, शब्द र मनोवृत्ति नकारात्मक र दुखी मनोदशा र कार्यहरू ल्याउँदछ। जब दिमाग नकारात्मक छ, विष रगतमा छोडिन्छ, जसले अधिक दुखी र नकारात्मकता निम्त्याउँछ।
असफलता, निराशा र निराशाको लागि यो मार्ग हो।
दिमागलाई सकारात्मकमा बदल्नको लागि, भित्री कार्य र प्रशिक्षण आवश्यक छ। मनोवृत्ति र विचार एकै रातमा परिवर्तन हुँदैन।
यस विषयको बारेमा पढ्नुहोस्, यसको फाइदाको बारेमा सोच्नुहोस् र आफैलाई यो प्रयास गर्न राजी गर्नुहोस्। विचारहरूको शक्ति एक शक्तिशाली शक्ति हो जुन सधैं हाम्रो जीवनलाई आकार दिन्छ। यो आकार सामान्यतया अवचेतन रूपमा गरिन्छ, तर यो प्रक्रिया एक सचेत एक बनाउन सम्भव छ।
यदि विचार अनौंठो देखिन्छ भने यसलाई प्रयास गर्नुहोस्, किनकि तपाईसँग हराउन केही छैन, तर प्राप्त गर्नका लागि मात्र। अरूले के भन्छ वा तपाईंको बारेमा सोच्न सक्छन् भन्ने उपेक्षा गर्नुहोस्, यदि तिनीहरूले पत्ता लगाए कि तपाईं सोच्ने तरिका परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ भने।
सधैं अनुकूल र लाभदायक परिस्थितिहरूको कल्पना गर्नुहोस्। तपाईंको भित्री संवादहरूमा वा अरूसँग कुरा गर्दा सकरात्मक शब्दहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
अलि बढी हाँस्नुहोस्, किनकि यसले सकारात्मक सोच्न मद्दत गर्दछ। आलस्य वा छोड्ने इच्छाको कुनै भावनालाई वेवास्ता गर्नुहोस्। यदि तपाईं लगनशील हुनुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो दिमागले सोचेको तरिकामा परिवर्तन हुनेछ।
एक पटक नकारात्मक सोच तपाईंको दिमागमा प्रवेश गरेपछि, तपाईं यसको बारेमा सचेत हुनुपर्दछ र यसलाई रचनात्मकसँग प्रतिस्थापन गर्न प्रयास गर्नुपर्दछ। नकारात्मक सोच तपाईको दिमागमा फेरि प्रवेश गर्न कोशिस गर्दछ, र त्यसो भए तपाईले यसलाई एक सकारात्मक साथ बदल्नु पर्छ।
यो तपाईको अगाडि दुई चित्रहरु छन् कि, र तपाईं ती मध्ये एक हेर्न र अर्को उपेक्षा गर्न छनौट गर्दछ। दृढताले अन्ततः तपाईंको मनलाई सकारात्मक सोच्न र नकारात्मक विचारहरू बेवास्ता गर्न सिकाउँदछ।
यदि तपाईले कुनै पनि भित्री प्रतिरोध महसुस गर्नुहुन्छ जब सकारात्मक व्यक्तिहरु संग नकारात्मक विचारहरु लाई विस्थापन गर्नुहुन्छ, हार नमान्नुहोस्, तर तपाईको दिमागमा भएको लाभदायक, राम्रो र खुशी विचारहरुलाई मात्र हेर्दै जानुहुन्छ।
वर्तमान परिस्थितिमा तपाईंको परिस्थिति के हो भन्नेले खास फरक पार्दैन। सकारात्मक सोच्नुहोस्, केवल अनुकूल नतीजा र परिस्थितिहरूको आशा गर्नुहोस्, र परिस्थिति तदनुसार परिवर्तन हुनेछ। यसले परिवर्तन लिनको लागि केहि समय लिन सक्दछ, तर अन्ततः तिनीहरू गर्छन्।
प्रतिलिपि अधिकार रेमेज Sasson
रेमेज स्यासनले सकारात्मक सोच, रचनात्मक दृश्य, प्रेरणा, आत्म-सुधार, दिमागको शान्ति, आध्यात्मिक वृद्धि र ध्यानमा सिकाउँछ र लेख्छन्। उहाँ धेरै पुस्तकहरूका लेखक हुनुहुन्छ, जसमध्ये "दैनिक जीवनमा शान्तिको शून्य", "विल पावर र सेल्फ डिसिप्लिन", "भिजुअलाइज एन्ड अचिभि" र "कन्फर्मेसन - शब्दको शक्ति" छन्।
उनको वेबसाइट हेर्नुहोस् र प्रेरणा, प्रेरणा र व्यावहारिक सल्लाह र निर्देशन भरिएको लेख र पुस्तकहरू फेला पार्नुहोस्।
वेबसाइट: सफलता चेतना
के यो लेखले तपाइँलाई तपाइँको जीवनमा वास्तवमै के चाहानुहुन्छ देखायो? के यसले तपाईंको जीवन परिवर्तन गर्न प्रेरित गर्दछ?
अब जब तपाईलाई थाहा छ तपाईको जीवनमा के चाहानुहुन्छ, तपाईंको जीवनलाई 30 दिन ईबुकमा परिवर्तन गर्नुहोस् तपाईको जीवनलाई सुधार्न र तपाई जस्तो व्यक्ति हुन चाहानुहुन्छ भन्ने बन्नको लागि एक उत्तम तरिका हो।
कृपया हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् यदि तपाइँसँग मनपर्ने छ भने प्रेरणादायक उद्धरण कि तपाईं अरूहरूसँग सल्लाह दिन चाहानुहुन्छ, सल्लाह, सुझावहरू, प्रश्नहरू जुन तपाईं उत्तर दिन चाहनुहुन्छ, उपयोगी लेख वा टिप्पणीहरू जुन अरूलाई सहयोगी हुनेछ - केवल हाम्रो फाराम पोस्ट गर्न वा शीर्षकमा जवाफ दिनको लागि।
पछिल्लोतपाईंको खराब डरबाट छुटकारा पाउन NLP प्रयोग गर्दै
अर्कोअसफलताको डरसँग कसरी सामना गर्ने र सफलताको आनन्द लिनुहोस्
5 सुझावहरू तपाईंको इच्छाशक्ति बढावा दिन
6 प्रभावी सकारात्मक सोच तकनीकहरू जुन काम गर्दछन्!